I-Dandelion Intsingiselo kunye neMpawu | Iintsingiselo zeentyatyambo - Iintsingiselo Iintsingiselo
Intsingiselo yeDandelion kunye nesimboli
Uyazulazula ungene eyadini eyayikho, eyayibonakala okomzuzwana odlulileyo, iluhlaza ngokugqibeleleyo ukuyifumana ichanekile ngeentyatyambo ezimthubi. Olu lukhula olulula, olungenakuchukunyiswa luye lwangumbane wabalimi abaninzi amashumi eminyaka, kodwa eneneni banikezela ngaphezulu kokudibana kuqala neliso. Inye into onokungayazi kukuba iidandelions ziyatyiwa- amagqabi enza iisaladi ezinkulu kwaye iintloko zingena kwiwayini phakathi kwezinye izinto. Ke xa ufuna ukufaka ngaphakathi indalo encinci, nibble kwi-dandelion kwaye ukonwabele ukunyamezela. Isilumkiso kuphela kukuqinisekisa ukuba iintyatyambo zakho azikhange ziphathwe ngamachiza (iidandelions azibonakali ngathi zikhathala, kodwa isisu sakho).
Umoya weDandelion yenye yeembali zentwasahlobo-ezisa uncumo ebusweni bethu kunye neengcinga zolutsha. Khumbula ukukha intyatyambo enembewu kunye nokwenza umnqweno? Umoya olula okanye ukuvuthuza kuwo kwathatha loo makhulu embewu ngomnqweno wakho kuzo zonke iimbombo zendalo. Kude kube namhla, iDandelion isasikhumbuza ukuba iminqweno inamandla, kodwa iza noxanduva. Sikhe sayithetha le nto ngaphambili: Imimoya yendalo inokuba yinto engenamsebenzi. Abasebenzi ngokuchanekileyo njengabantu, nto leyo ebenza bonwabe kakhulu. Eyona nto ayithandayo uDandelion kukuba 'lindela okungalindelekanga.'
Ehlabathini lonke iidandelions zifanekisela ulonwabo, uvuyo olulula, amaqabane alungileyo kunye nobukho bomntwana wethu ongaphakathi ohlala elibala ukudlala. Kuyathakazelisa ukuqaphela ukuba abantu basamxabisile lo mhlobo uhambileyo ngokwaneleyo kwi-1800s ukubenzela indawo kwigadi ngokususa- egad - ingca! Bayiqonda njengenxalenye yekiti yomnyangi kunye nesityalo esenzele isiseko sedayi esihle phakathi kwezinye izinto. Kukho konke oku, i-Dandelion imele into ebalulekileyo: ezo zinto zincinci sicinga ukuba ziyacaphukisa zinokuba nexabiso elikhulu. Buyela umva ujonge okwesibini.
Kuba isifundo esaziwa kakhulu sibonisa ukuba i-dandelion sesinye sezityalo abantu abangacingi ngazo ngaphandle kwaxa bechetya ingca. Kukho ukungathobeki malunga nale ntyatyambo yomlingo ethobekileyo. Ngaba uyazi ukuba iidandelion intyatyambo inde kunezinye izityalo kwindawo yazo? Bamele ukuhlala ngamandla ngendlela ebonakalayo. Kuya kuba njani ukuba nekhaphethi epheleleyo yeDandelion yengca ngokuchasene nemithi ehlala iluhlaza kunye neetulip? Kuyamangalisa ukuza engqondweni.
I-Metaphysically Dandelion nayo ineenyawo ze-gypsy. Ungumhambi kakhulu-uthatha imbewu yakhe kangangeekhilomitha ezintlanu ukusuka kwisityalo esivela kuso. Xa ujonge ukusika imitya yefaskoti kwaye uhambe ngendlela, ulandela apho umoya ukukhokelela khona, lo ngumoya wesityalo onokufumana kuwo ukuqonda.
Unxibelelwano lweCrystal lweDandelion:
Quartz (amandla okutsala); Quartz yomnyama. Icitrine
Uluhlu lwamagama egama Dandelion
UVictorian uLwimi lweentyatyambo
Aromatherapy kunye nolunye unyango
Iintsingiselo zokomoya kunye nokudibana kweMetaphysical
Buyela kwiintsingiselo zeentyatyambo
Iintsingiselo zombala weDandelion
Akunakwenzeka ukuba ungaziqapheli iintyatyambo ezikhanyayo ze-Dandelions. Ingathi bayancuma xa bevula, yiza nentyatyambo amandla olonwabo olunyulu. Khulula izihlangu zakho! Baleka! Dlala ngeentyatyambo. Bathanda into encinci. Ngelixa i-Dandelion inenye imbalelwano yamandla nesibhakabhaka esiza kuyichukumisa apha, akunakwenzeka ukuba ungayihoyi into yelanga, edibanisa ne-chakra yesithathu. Camngca
ngelinye idandelion ekunene kwi-plexis yakho yelanga ukuqhuba ukuthanda kunye nobukroti kunye nembono entle esempilweni.
Ukuphupha iidandelions luphawu olulungileyo ikakhulu kubudlelwane. Inokuthi isebenze njengophawu lokoneliseka okanye ukunxibelelana nomntwana wakho ongaphakathi. Unokufunda ngakumbi malunga nokubonakala kweentyatyambo ephupheni lakho ngokujonga kwakhona kwisichazi-magama samaphupha.
IDandelion kuLwimi lweVictorian kuLwimi lweentyatyambo
IDandelion ithatha igama layo kwigama lesiFrentshi elithi 'dent de lion'. Oku kubhekisa kwindlela amagqabi akhonjwe ngayo kwaye ajongeka kancinci njengezinyo lengonyama. Ukuba iNgonyama inguKumkani weJungle, kwaye uRose uyiKumkanikazi yegadi, iDandelion yiNkosazana yengca. KuLwimi lweVictorian lweentyatyambo umele ii-Oracle, uLonwabo kunye nokuthembeka.
Ukuba uneengxaki zesifo se-pollen allergies, i-Dandelion ayiboniswanga. Nangona kunjalo, inamandla amakhulu endalo petal kwabo bafuna ezinye zeNdalo. Isityalo sineempawu zendalo zokuchama kunye nokuhambisa isisu ngokulula esiswini. Kukwaluncedo olukhulu kwiivithamini emzimbeni, ineevithamini ezininzi kunye neeminerals ezixhasa ukusebenza kwezintso. Unokwenza ingcambu ye-dandelion kunyango lwangaphandle olucaphukisayo, ulushiye kwindawo echaphazelekayo malunga nemizuzu eli-15.
Kulabo banamabala amdaka okanye amabala okuguga, iintyatyambo ezenziwe nge-lotion zincedisa ukuzenza mhlophe ezo ndawo. Iti yeDandelion ibonakalise ukuba iyasebenza ekulweni induna. Amagqabi eDandelion asetyenziswe eluswini aphucula ukujikeleza.
Leo indoda kunye nomfazi taurus ebhedini
I-Dandelion yeentsingiselo zokomoya kunye nembalelwano yeMetaphysical
Mhlawumbi omnye wobugqi bokuqala umntwana ufunda ngendlela yesiko lesiqhelo usebenzisa iDandelion yeentlobo ezahlukeneyo zemilingo enovelwano. Bayibiza ngokuba yimvano-siphelo yabantwana okanye abanayo namagama ayo, kodwa njengokufunda kukaDaisy 'ngubani ondithandayo' yenye yeendlela iDandelion eyanxulunyaniswa nokuvumisa. Ziyilungelelaniso yenyanga kwifom yembewu ekhokelela ekusebenziseni kwabo kwimilingo yemozulu, kwaye ukusela itiye yeDandelion kuthiwa ukuphucula amandla akho okuxela kwangaphambili. IMaatat Tarot ine-dandelion njenge-9 yeekomityi. Imifanekiso ibonisa umntu ovuthela kwintloko yembewu yeDandelion xa intsimi ephambi kwabo sele igcwele. Oku kudibana ngqo nomoya kaDandelion ngokubhekisele ekunikezeleni iminqweno kodwa kukwasikhumbuza ukuba ukuba asilumkanga - iminqweno yethu inokuzaliseka ngeendlela ebesingazilindelanga.
Ukuba yintyatyambo eqhelekileyo akumangalisi ukufumana uninzi lweenkolelo ezikhula zijikeleze lo Moya weentyatyambo.
Elona dandelion lide lifunyenwe ngumntwana entwasahlobo libonisa ukuba uza kukhula kangakanani kuloo nyaka.
Xa usenza umnqweno, ezinye iimbewu ezisele kwisiqu zibonisa ithamsanqa
I-dandelion ifanekisela ilanga (intloko yayo yegolide), inyanga (imbewu emhlophe ekhukhumeleyo) kunye neenkwenkwezi (xa zivuthela umoya). Le yinxalenye yesizathu sokudibana nokunqwenela.
Iidandelions zivula iipalali zazo kusasa ukubulisa emva koko ilanga, zize zivale ebusuku zilale.
Ukuba imozulu embi iza isityalo seDandelion kwikona yomntla-ntshona wepropathi yakho ukukhusela
I-Dandelion kwisipha somtshato iqinisekisa isibini sethamsanqa
Ukuba ubambe idandelion phantsi kwesilevu sakho kwaye ulusu lwakho lukhangeleka njengegolide, ngumqondiso wobutyebi.
Ukuphonononga iinkqubo ezahlukeneyo zoLwazi lokuBala kubonakala ngathi kukho ukungangqinelani malunga nokuba liliphi inani elisebenza kwiDandelion. Ukulungiselela le njongo yokubhala, sihambe namaxabiso abhalwe ngonobumba onobumba, nto leyo ekhokelela ekubeni u 6. 6 amele ulingano, ububele, imfesane, imvisiswano kunye noluntu. Uluntu luphuma kunye neDandelion njengoko zihlala zibonakala zinamaqabane amaninzi eyadini. Ngokwe-equilibrium, intloko yedandelion inobungakanani obuhle obujikeleza ngaphandle ngokulinganayo bokuzoba abo banentliziyo yolutsha okanye umoya onesibindi sokuphupha.
Iingcambu zeDandelion eyimfihlakalo zifikelela kude kakhulu kwimbali. Ama-Egypt amandulo, amaRoma, amaGrike, amaJapan kunye namaTshayina ngokufanayo basebenzise ezi zityalo ngeendlela ezahlukeneyo amawaka eminyaka. Kuninzi kwimeko yokuba nesazi sezityalo esona sigqwesileyo kuya kuba nzima ukuba sinike imvelaphi ethile kunye nembali yale ntyatyambo. Ingathi ihlala ilapha, kwaye izicwangciso zokuhlala kunjalo.
Inqaku elinomdla lokuba ookhokho bethu babonakala ngathi bayayazi ukuba asiyenzi (okanye khange siyenze) kukuba olu khula luhle luwulungele umhlaba wakho. Iingcambu ezifikelela ezantsi ukuya kwi-15 ’zinciphisa ukhukuliseko lomhlaba, zivuse umoya emoyeni kwaye zisebenze njengesichumisi sendalo. Mhlawumbi yiloo nto bephila kangaka-abahlali nje kuphela kodwa banceda uluntu lwendalo olujikeleze bona ngaxeshanye.
Kukho umbhalo ongaziwayo wemvelaphi oqala ngeNgelosi eyayongamele zonke iintyatyambo eMhlabeni. Weza ejonge kwimimoya eyahlukeneyo ebabuza ukuba bafuna ukuhlala phi. I-tulip yayifuna igadi yenqaba apho inkosazana yayinokuza kuyo. Irosi yayifuna inqaba yokukhwela ezindongeni apho yayinokukhuseleka khona. Iimpendulo ezinje ngezi zenza iNgelosi yaba lusizi kakhulu de ekugqibeleni yamfumana uDandelion owaphendula ukuba angonwaba naphina apho abantwana bangamfumana khona - bedlala emasimini, behamba ngamatye, ezindleleni - naphina apho angazisa khona uncumo. Ngenxa yoku ingelosi yamsikelela ngexesha elide lokukhula kwaye wayichaza njengentyatyambo yomntwana.
Indoda ye-aquarius kunye nebhinqa le-leo ebhedini
Indoda ye-gemini kunye ne-libra umfazi ebhedini
zithini zonke iiplanethi ezinqabileyo kwinkqubo yethu yelanga
izakubonwa nini kwakhona i-hiking comet